Madaxweyne Xaaf oo sheegay in Galmudug aysan heysan Xorriyad dhameestiran, xilli loo dabaal dagayo maalinta Xorriyadda Soomaaliya – Kalfadhi
Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle “Xaaf” ayaa sheegay in Soomaaliya maanta ay u dabaal dageyso maalinta Xorriyadda Gobalada Waqooyi, sidoo kalane ku beegan maalintii ugu horreysay oo calan Soomaaliyeed laga taago dalka basle waxa uu sheegay in Soomaaliya ay maanta heysato Xorriyada qarsoon.
Xaaf oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Cadaado ee Gobalka Galgaduud ayaa sheegay in dhib badan laga soo maray Xorriyadda Soomaali balse maanta dalka ay ku jiro xaalad adag oo dhan kasta ah.
“Aniga waan joogay maalintii calanka laga taagay Hargeysa waxay aheyd maalin weyn oo qiima badan waana ugu hambalyeeynayaa dhamaan Shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri Axmed Ducaale Geelle Madaxweynaha maamulka Galmudug.
Xaaf ayaa sheegay in Soomaaliya aysan maanta ka jirin Xorriyad dhameestiran balse ay ka jirto Xorriyada qabyo ah iyo mid qarsoon waxa uuna ku baaqay in Galmudug oo aan xor aheyn Xorriyadeeda la raadiyo.
“Soomaaliya waxa maanta ka jira waa Xorriyad qarsoon ama lala dhuumanayo” ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.
“Aqoonyahaanka, Siyaasiinta, Xildhibaanada iyo odayaasha halkaan jooga waxaan ka codsanayaa in ay raadiyaan Xorriyadda Galmudug” ayuu yiri Madaxweyne Xaaf. “Galmudug Xor ma ahan dhibaato ayaa heysato” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaalle oo maalmihii la soo dhaafay ku sugan Madaxtooyada magaalada Cadaado.